Electron 9.0 inouya neiyo PDF muoni inogoneswa nekukasira, Linux zvinowedzera uye zvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Electron 9.0 inouya nePDF muoni inogoneswa nekutadza, zvinowedzera zveLinux uye zvimwe
Electron's epakati zvinhu zviri Chromium, Node.js, uye V8. Iwo magadzirirwo akaiswa makodhi muNode.js uye iyo interface inoenderana neChromium maturusi, iyo yakavhurika sosi chikamu cheGoogle Chrome. LNode.js ma module anowanikwa kune vanogadzira, pamwe neiyo yepamusoro API kugadzira yemuno dialog mabhokisi, sanganisa mashandisiro, gadzira mameseji emamiriro ezvinhu, sanganisa neye ziviso yekubuda system, maneja windows uye nekudyidzana neiyo Chromium subsystems.
Kusiyana newebhu webhu, Ectron-based zvirongwa zvinouya zviri zvemafaira akazvimiririra anoshanda izvo zvisina kubatana nebrowser.
Mune ino kesi, iye anovandudza haadi kunetsekana nezve kuisa chikumbiro kune akasiyana mapuratifomu, Electron ichapa kugona kuvaka kune ese maChromium anoenderana masisitimu. Electron inopawo maturusi ekuronga otomatiki kuendesa uye kumisikidza zvekuvandudzwa (zvigadziriso zvinogona kuunzwa kubva kune rakaparadzaniswa server kana zvakananga kubva kuGitHub).
Chrome 83 inosvika pamwe nekuvandudzwa kwekuchengetedzeka uye akati wandei kugadziriswazve, pakati peimwe shanduko
1 Chii chitsva muElectron 9.0?
2 Nzira yekuwana Electron paLinux?
Chii chitsva muElectron 9.0?
Mune iyi vhezheni nyowani yesystem, pamusoro pekusimbisa kuvandudzwa kwezvinhu zvacho (sezvatambotaura pakutanga) kupera kwekutsigira 6.x bazi rakataurwa muchiziviso, saka chero chishandiso chakavakirwa pairi, zvinokurudzirwa kuti iyo yekuvandudza iitwe kune rakatsiga bazi uye kune rimwe divi kutanga kwebasa pane inotevera vhezheni 10.0 inosimbiswawo.
Dzimwe shanduko dzinooneswawo, senge iyo yekumisikidza marongero app.allowRendererProcessReuse iyo yatogoneswa nekutadza. Uku kumisikidzwa hakubvumidze kurodha mune yekupa maitiro enharaunda ma module mamiriro ezvinhu anonzwisisika.
Paunenge uchifambisa mabhuru makuru uye zvinhu zvakaomarara, iyo algorithm nyowani ingangoita zvakapetwa nekukurumidza pamwe nekunonoka kusingachinje mukuendesa mameseji madiki.
Iyo zvakare inomira mushanduro iyi nyowani, iyo kuperetera kugona kugona kwakawedzerwa uye a API yekuchengetedza echinyakare mazwi zvinyorwa muduramazwi.
Mune vhezheni yesystem Yepuratifomu yeLinux, kugadziriswa kwezviitiko zvine chekuita newindo kwakagadziridzwa
Uye kuti maAPI anotevera adzikiswa kana kubviswa:
shell.openChinhu Iyo API iko zvino yadzikira uye yatsiviwa neasynchronous shell.openPath API.
.getWebContents, iyo yakadzikiswa muElectron 8.0, ikozvino yabviswa.
webFrame.setLayoutZoomLevelLimits, iyo yakadzorwa muElectron 8.0, ikozvino yabviswa.
Pakupedzisira, kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo nezve iyi nyowani vhezheni yesystem, unogona kutarisa ruzivo mune inotevera chinongedzo.
Nzira yekuwana Electron paLinux?
Kune avo vanofarira kugona kumhanyisa kunyorera uye / kana kugona kushanda neElectron mukati meLinux, Isu tinongofanirwa kuve neNode.JS yakaiswa pane ino sisitimu uye iyo NPM package maneja.
Kuisa Node.JS paLinux, unogona kushanyira iyo bhuku kwatinotaura nezve itsva vhezheni yeNode uye pakupera kwayo iwe unowana iyo yekumisikidza mirairo kune mamwe akasiyana Linux migove.
Node.js 14.0 iri uye idzi ndidzo nhau dzayo
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Electron 9.0 inouya nePDF muoni inogoneswa nekutadza, zvinowedzera zveLinux uye zvimwe
Defold: muchinjika-chikuva giraidhi injini inoenda yakavhurika-sosi
Kujekerwa 0.24 inosvika ine skrini yekuvandudza, kupenya kudzora uye nezvimwe